Chautari Daily » ‘शक्तिशाली हरुका अगाडी आज पनि यो मुलुकमा कसैको केही चल्दैन’
‘शक्तिशाली हरुका अगाडी आज पनि यो मुलुकमा कसैको केही चल्दैन’
नेपालको इतिहासमा सम्भवत: पहिलो पटक उच्च अहोदाका राजनीतिज्ञ माथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेको छ,ती आरोपित व्यक्ति प्रतिनिधि सभाका सभामुख हुन। मुलुकको संघीय संसदका सभामुख माथि ज’बर ज’स्ती जस्तो जघन्य आरोप मात्रैले पनि देशको शिर निहुरिएको छ । यद्यपी लागेको आरोप पुष्टी हुनुअघि उनलाई दो’षी करार गर्न सकिदैन, मिल्दैन ।
तर, एसिया कै उत्कृष्ठ प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर पनि अनुसन्धान अघि बढाउनुको साटो हाकिम साबलाई खबर गर्न तिर लाग्यो । साब ! यस्तो अचम्मको कुरा सुनियो भनेर हेडक्वाटरमा खबर गर्यो । घटनास्थल सुरक्षित राख्ने, अनुसन्धान अघि बढाउने कुरा त तालिम निर्देशन पाएको भएपो गरोस् । तुरुन्त छानबिन गर्ने दिर्नेशन दिनुको साटो गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउन तिर लाग्यो ।
आखिर फुलिकै माया ठूलो न हो । सर्वसाधारणलाई भएपो आरोप लाग्नसाथ जाहेरी नै नपर्दासमेत झ्याप पारेर समात्ने, थुनिहाल्ने हो । ठूलालाई त आदेश अनुसार हुन्छ, कानून अनुसार होइन ? पीडित र घटनास्थल जोगाउनु भन्दा फुली जोगाउन सजिलो भएपछि हेडक्वाटरले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई जानकारी गरायो । तर गृहसचिव र गृहमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी पाइसकेपछि पनि यस्तो जघन्य अपराधको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढेन ।
पीडितका अनुसार भोलीपल्ट बिहान सभामुख ज्यूले कुन मुखले हो, भाइबरमा म्यासेज पठाउनुभयो । ‘फर्गेट यस्ट्रर्डे, सरी!’ त्यसपछि मंगलबार (आज) बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच यस घटनालाई लिएर कुरा भयो । सत्तारुढ दलभित्र यस घटना लाई लिएर छलफल भयो । एउटी महिलाले ‘म माथि जबरजस्ती करणी भयो’ भनेर घटनास्थलमा प्रहरीलाई बोलाइसके पछि प्रहरीको काम आरोपित मानिस कुन प्रोफाइलको हो भनि चेक गर्ने हो कि, घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने हो
हो, हाई प्रोफाइल व्यक्तिको नाम संलग्न भएपछि त्यसले तरङ्ग ल्याउँछ । स्वभाविक हो तर, अनुसन्धान नै रोकेर भएका गतिविधिले चलखेलको सहनै नसक्ने दुर्गन्ध त ह्ववास्स आयो । एउटा प्रहरी बिटका सामान्य प्रहरीले जागिरको माया गरे । आदेशको पालना गरे, तर यो देशका अविभावक, देशका ‘बा’ प्रधानमन्त्रले समेत घटना थाहा पाउना साथ तुरुन्तै अनुसन्धान अगाडि बढाउनु भनेर निर्देशन दिएनन् ।
यहाँ भन्दा बढी कति रुनु । जवरजस्ती करणी जस्तो जघन्य आरोपमा व्यक्तिलाई हेरियो, घटनालाई हेरिएन। कानून आदेशमा चल्ने र गरीब, निरिह सर्वसाधारणका लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरा यो घ’टनाले पुष्टी गरिदियो। सभामुख कृष्णबहादुर महरा निरदोष हुनु हुन्छ होला, तर त्यसका लागि पनि त अनुसन्धान चाहिएला नि ! यो हुकुमी शासन त होइन, तर नेपाल प्रहरी, गृह प्रशासन देखि सम्बन्धित सबैले त्यही झल्को दिए ।
शक्तिशाली हरुका अगाडि आज पनि यो मुलुकमा कसैको केही चल्दैन । यदि चल्थ्यो भने, निर्वाचनका लागि ६० करोड मोलतोल गरेको अडियो रेकर्डिङ नै बाहिर निस्केको थियो महराजीको । तर परिणाम के भयो? कृष्णबहादुर महराजी झनै शक्तिशाली हुनु भयो । त्यसैले यो घटनामा पनि हुने केही होइन, बरु यसरी बोलेकोमा हामीले चाँही अर्को कुन मूल्य चुकाउनुपर्ने हो, भगवान जाने ।
कानून सबैलाई बराबर छैन । आदेश दिनेले आदेश दिए भने नेपाल प्रहरीले सलाम ठो’केर हस साब, भन्छ नै भन्छ । यसो भन्दा चिलाउने आफ्नै गर्धन नै हो, थाहा छ । आफ्नो कर्तव्यबाट पटक– पटक चुकेको प्रहरी यस घटनामा पनि नराम्रोसँग चुक्यो । फलस्वरुप केही बेर अगाडि पीडित महिलाको बयान नै फेरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । भर्खरै उनले एक अर्को सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै भनेकी छन्, ‘महरा सर मेरो बुबा जस्तो मान्छे ।’
रिसको झोँकमा आँफूले भनेका सबै कुरा गलत हुन् ! अब अनुसन्धान नै नभएको बिषयमा फुटेको चश्मा कस्को हो ? जुत्ताको तलुवा कसको हो ? कुटेको डाम र लुटेको इज्जतको त कुरै नगरे पनि भइ हाल्यो । महरा जीको सचिवालय विज्ञप्ती मार्फत भन्छ– ‘महराजी ती महिलाको निवासमा जानु भएकै छैन ।’ महराजी स्वयं भन्नुहुन्छ–‘गएको हुँ ।’
अब राजीनामा समेत आइसके पछि आरोप लगाउने महिला भन्दैछन्– ‘आइतबार आफ्नो कोठामा कोही पनि आएको छैन ।’कल डिटेल्स, लोकेशन ट्र्याक, सीसी टिभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी सबै मिलिसक्यो ? पीडितले बयान फेरेपछि सभामुखमै निरन्तर हुन पनि सक्नु हुन्छ । हो, यहाँ जे पनि हुन्छ । भन्न मन त कत्ति छ कत्ति ? तर, राम्ररी थाहा छ, यहाँ जे पनि हुन सक्छ । तर जे सुकै होस् एउटा कुरा चाँही भन्छु भन्छु, कुरा क’तिमा मिल्यो, केमा मिल्यो ?
प्रकाशित मिति १४ आश्विन २०७६, मंगलवार १६:२३